Fasaxa Shaqada: Ciidaha Dhalashada, Korinta, Xafladaha Dugsiga | LawHelp Minnesota
Time Off from Work: Birth, Adoption, School Events (PDF)301.76 KB
COVID-19. Waxaa jira sharciyo cusub oo ku saabsan fasaxyada taasoo ay ugu wacan tahay cudurka dilaacay. Soo booqo https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
Waxa aad xaq u leedahay in aad qaadato fasax aan lacag lagu siineyn (fasax shaqo) ee shaqada taasoo ay ugu wacan tahay uurka, dhalashada, dhalmada, ama fasaxa dhalmada, si aad ula wargeeto ilmo aad korsaneyso, ama sababo kale oo la xiriira caruurta.
Sharciga Fasaxa Qoyska (FMLA)
Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha (hoos akhri), sharciga dawladda dhexe ee lagu magacaabo FMLA ayaa xuquuq kuu siinaya in aad qaadan karto ilaa 12 blilood oo fasax ah. Shaqadaada waa laguu heynayaa haddiii aad qaadato fasaxa FMLA. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in shaqadaada dib laguugu soo celiyo ama lagu siiyo mid u dhiganta dhamaadka fasaxaaga FMLA.
Haddii uu kuu ururay fasax bukaan ama fasax caadi ah, waxa aad isticmaali kartaa mudada fasaxa FMLA. Waxaa laga yaabaa in madaxdaadu kugu khasbaan in aad isticmaasho. Mudada aad fasaxa ku jirto, ceymiskaaga caafimaadka waad heysaneysaa sidii adiga oo sheqeynaya oo kale. Waa in aad bixisaa lacagta bisha ee ceymiska.
Ma ka soo baxay shuruudaha FMLA?
Si aad xaq ugu yeelato waa FMLA, waa:
In aad u shaqeysaa loo shaqeeyaha sharcigan qabanayo (50 ama wax ka badan oo shaqaale ah muddo 20 todobaad ah)
In aad shaqeysay 1,250 saacadood 12ka bilood ee ka horeeya inta aanu fasaxa bilaaban. ka hor
In aad ka shaqeyso goob ay 50 ama wax ka badan oo shaqaale ah ka shaqeeyaan ama meel u jirta 75 mayl, oo aad
Aad ka shaqeysay goobtaas ugu yaraan 12 bilood.
Waa maxay sababaha aan u isticmaali karo fasaxa FMLA?
Shaqaalaha oo dhan waa ay isticmaali karaan fasaxooda FMLA iyaga oo isu raacinaya sida ay u doortaan:
Dhaawac khatar ah oo jirka ama maskaxda ah oo u baahan daryeel caafimaad.
Si ay u xanaaneeyaan waalid, xaas/say, ama ilmo xaalad caafimaad oo khatar ah la soo deristay.
Qaliin, ama bogsashada qaliinka ka dib.
Qof dumar ahoo u qaadaneysa 12 todobaad oo fasaxa FMLA isku dhafka sida soo socota:
dhalmada ka hor
in aysan wax qabsan karin uurka dartiis (tusaale ahaan, walaca)
naafanimo kaga timaada xagga uurka dhalmada ka dib. Xilliga dhalmada ka dib. Waxa ay qeyb ka noqon kartaa naafada mudada gaaban ah.
la joogista ilmaha dhalmada ka dib inta mudadu ka dhamaato.
sababo la xiriira la wareegidda ilmo aad korsato ama ilmo laguu dhiibay.
Qof rag ah oo u qaadanaya 12 todobaad oo fasaxa FMLA isku dhafka sida soo socota:
Inuu xanaaneeyo xaas xaaladeedu khatar ku jirto, oo ay ka mid tahay xaaald la xiriirta uurka.
la joogista ilmaha dhalmada ka dib.
Sababo la xiriira la wareehidda ilmoaad korsato ama ilmo laguu dhiibay.
Ma kala qeybsan karaa fasaxa FMLA?
Haa. Waxaa laguu ogol yahay in aad FMLA u qaadan si joogta ah ama kala googo’an. Fasaxa waxa looqaadan karaa qeybo yaryar. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay balan dhakhtar todobaadkii hal mar 3da galabnimo, laakiin aad inta badan shaqeyso ilaa 5ta galabnimo, waxa aad qaadan karata fasax kala googo’an todobaadkii hal mar muddo laba saac si aad caafimaadkaaga u daryeesho.
Fiiro gaar ah: Fasaxa ilmaha dhashay aad la joogto si aad isu barataan qaado hal mar oo xiriir ah, haddii aan loo shaqeeyuhu ogolaan si ka duwan sidaas.
Maxaa la iga doonayaa in aan sameeyo si aan u qaato FMLA?
Waa in aad goobta shaqada siisaa 30 maalmood oo ogeysiis ah, haddii aad. Haddii aadan siin, ogeysiis sida ugu dhaqsaha badan. Waa in aad u sheegto goobta shaqada sababaha aad uga soo baxday shuruudaha FMLA. Kani waa xafiiskaaga shaqaada oo ogsoon in aad weydiisaneyso FMLA. Fasax bukaan oo aad weydiisato kaliya kuma filna.
Loo shaqeeyaha waxa uu ku weydiiisan karaa cadeyn ku saabsan xaaladda, sida cedyn uu soo qoro dhakhtarkaaga. Loo shaqeeyaha waxa uu la xiriiri karaa dhakhtarkaaga si uu hubiyo macluumaaka.
Sharciga Minnesota Uuureyda Iyo Waalidnimada Ee Fasaxa
Sharciga waxa ogol yahay ilaa 12 todobaad oo faax lacag la’aan ah:
waalidka dhalay ama korsaday ee la xiriir dhalashada ama ilmo aad korintooda la wareegeyso.
Qof dumar ah xilliga uurka, ama naafanimo kaga timaadda uurka, dhalmada ama xaalado la xiriira.
Xaaladaha qaarkood, fasaxa la xiriira dhalmada ama la wareegidda ilmo aad korsato waa in la qaataa 12 bilood gudahood ee xiliga dhalamada ama la wareegidda ilmaha.
Waxa aad xaq u leedahay inuu kuu sii socdo ceymiskaaga caafimaadka ee shaqada inta aad fasaxa ku jirto, laakiin waxaa suurogal ah in aad bixiso kharashka ceymiska ee bil kasta.
Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha Sharciga Minneasota ee Uurka iyo waalidnimada, waxaa laga yaabaa in qofka shaqalaaha ah uu kuu xisaabo labadaba isku mar si uu uga hortago in aad laba fasax qaadato. Waxaa laga yaabaa in goobta shaqada fasax laga siiyo haddii aad qaadaneyso macaashka ama aad fasaxa u qaadaneyso Uurka ama Waalidnimada.
Waa in loo shaqeeyaha kuu soo celiyaa shaqadaada ama ku siiyaa shaqo u dhiganta fasaxa ka dib.
Ma ka soo baxa Shruruudaha Sharciga Minnesota ee Uurka Iyo Waalidnimada?
Waxa aad qadan kartaan fasaxan haddii:
Aad u shaqeyso shirkad ay u shaqeeyaan ugu yaraan 21 qof,
Waxa aad halkaas ka shaqeysay ugu yaraan 12 bilood fasaxa ka hor, oo
Ka shaqeysay ugu yaraan kala bar waqtiga (sida lagu qeexay sharciga u degsan loo shaqeeyaha) 12kii bilood ee ka horeeyey fasaxa.
Fasaxa Waalid La Wareegaya Ilmo Uu Korsanayo
Haddii aad la wareegeyso ilmo aad korsaneyso laakiin aadan ka soo bixin shuruudaha fasaxa FMLA ama fasaxa waaalidnimada ee Minnesota, waxaa laga yaabaa in aad ka soo baxdo shuruudaha fasaxa la wareegidda ilmo aad korsato. Haddii loo shaqeeyuhu kuu ogolaado fasaxa dhalmada ama uureyda, waa in ay ogolaadaan fasaxa la wareegidda ilmo aad korsaneyso.
Loo shaqeeyaha u ogolaada in aabaha ilmaha u dhashay fasax u qaadan karo ama hooyadu u qaadan karto fasaxa uurka ama dhalmada waa inuu siiyaa waqti kaasoo u dhigma hooyada ama aabaha la soo wareegaya ilmo uu korsado. Fasaxaas waxa uu ka bilaabanayaa ka hor, ama waqtiga, ilmaha la keeno guriga. Waqtiga fasaxa ah waa in lagu beegaa marka ilmaha guriga la keeno ama la doonayo in ilmaha la xanaaneeyo.
U Fududeynta Uurka
Gobaha shaqada intooda badan waa in ay sameeyaan u fududeynta suuro galka ah ee shaqaalaha uurka leh oo weydiista. Laakiin, shaqaaluhu xaq uma laha u fududeynta haddii ay culeys dhaqaale ku noqoneyso shirkadda. Haddii aadan ka soo bixin shuruudaha u degsan FMLA ama Sharciga Uureyda Iyo Waalidiinta ee Minnesota, waxa aad qaadan kartaa fasaxa uureyda si laguugu fududeeyo.
Haddii aad tahay hooyo nuujineysa, shaqaalaha waxaa waajib ku ah in ay ku siiyaan fasaxa suurogalka ah maalin kasta si aad naashaha caanaha uga saarto oo aad ilmahaaga meel ugu keydiso. Waxaa laga yaabaa in aan lacag lagu siin mudada fasaxa. Waxaa kale oo suurogal ah, in aad fasax ka dhigan karto waqtiga nasashada ee horey laguugu qorsheeyey.
Waa in loo shaqeeyuhu kuu siiyaa goob aad caanaha isaga listo.
waa in aysan aheyn suuliga ama qubeyska.
waa in ay noqotaa meel qarsoon
waa in ay noqotaa meel ka xiran shaqaalaha iyo dadweynaha.
haddii ay suurogal tahay waa in ay noqotaa meel u dhow goobta shaqada, oo leh bareesada korontada.
Fasaxa Kulanka Dugsiyada Iyo Ciyaaraha Ardayda
Waxa aad qaadan kartaa ilaa 16 saacadood oo fasax ah 12kii biloodba si aad uga qeyb qaadato kulanka dugsiyada ama waxyaabaha la xiriira waxbarashada ardayda. Loo Shaqeeyaha khasab kuma aha in ay ku siiyaan fasax lacag lagu siiyo laakiin xaq ayaad u leedahay in aad fasax qaadato si aad uga qeyb qaadato kulanka dugsiga iyo waxyaabaha la xiriira.
Ma ka soo baxa Shuruudaha Fasaxa Kulanka Dugsiyada Iyo Waxyaabaha La Xiriira
Aad shaqeysay kala bar waqtiga
Ilmahaaga da’diisu ka yar tahay 18jir, ama 20 laakiin uu weli dhigto dugsiga sare.
Kulanka dugsiyada iyo waxyaabaha la xiriira lama qaban karo waqti ka baxsan saacadaha shaqada, oo
Loo sheeqayaha ay waajib ku tahay inuu kuu fiidiyo u fududeynta suurogalka ah si aad fasax u qaadato.
Wixii su’aalo ah?
Minnesota Department of Labor and Industry (Waaxda Shaqaalaha Iyo Warshadaha ee Minnesota)
U.S. Department of Labor (Wasaaradda Shaqada Ee Mareykanka)